Maherifo afrikana: Bellydancer, Popstar, Designer lamaody, ekipa nofinofy fizahan-tany ary mpilomano
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Maherifo afrikana: Bellydancer, Popstar, Designer lamaody, ekipa nofinofy fizahan-tany ary mpilomano
Ny birao fizahantany afrikanina dia teo amin'ny laharana voalohany raha mipoitra izao krizy mipoitra izao.
Skal, ny fikambanan'ny indostrian'ny fizahan-tany lehibe indrindra dia milaza hatrany amin'ny fizahan-tany mba hanao orinasa miaraka amin'ny namana. Mampiray antsika ny fizahantany fa tsy mizarazara. Fantatry ny afrikanina izany.
Nanjary miray hina i Afrika amin'ny faniriana ireo mpitsidika hijanona ao an-trano, noho izany ny mpizahatany manerantany dia azo raisina an-tanindrazana hiverina any amin'ny kaontinanta mahafinaritra. Tsy andrin'i Afrika ny hitsenana ireo mpitsidika amin'ny tanany malalaka.
Mba hanatanterahana izany dia nanaiky ny tolo-kevitry ny UNWTO nanao hoe: "Raha mijanona any an-trano anio isika dia afaka mandeha rahampitso."
Zimbaboe vao namoaka horonantsary fitodiana antsoina hoe "Amin'ny taratasy maivana kokoa", dia afaka hireharehan'ny firenena sy ny kaontinanta iray manontolo. Zimbaboe koa tsy afaka miandry ny fandraisana ireo mpitsidika hiverina any amin'ny toerana nahagaga azy ireo.
Mpandihy kibo any Afrika atsimo manao fampisehoana an-tserasera, nanova ny famokarana hitazomana an'i Afrika ho tsara ny mpamokatra lamaody any Libya, ary nametraka ekipa nofinofy iraisam-pirenena ny Birao Fizahan-tany Afrikanina izay miasa tsy an-kijanona ao ambadiky ny sehatra mba hamonjy ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany any amin'ny kaontinanta.
Reny Africa dia manana mahery fo be loatra tsy hotanisaina ary hotononina anarana.
Afrika dia mipoitra amin'ny kaontinanta iray izay miatrika ilay virus mahafaty miaraka amin'ny herim-po avy any atsimo ka hatrany avaratra ary avy any atsinanana ka hatrany andrefana ny kaontinanta. Anisan'ireo mahery fo ireo ny mpikambana marobe amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Eo ambany fitarihan'ny Birao fizahantany afrikanina ary ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha Dr. Taleb Rifai sy Alain St. Ange, minisitry ny fizahan-tany teo aloha Seychelles, dia napetraka ny vondron'asa iray hijoro ao ambadiky ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Tsy misy tsy fahampian'ny fahalianana amin'ireo firenena sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy manerana ny kaontinanta ho voalamina mba hamonjy ny iray amin'ireo mpamatsy vola lehibe indrindra ho an'i Afrika - ny Indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Nanangana ekipa nofinofy iray ho an'ny Task Force Afrikanina i Rifai. Anisan'izany i Gloria Guevara, CEO an'ny WTTC, ny World Council and Travel Council; ny Hon. Edmund Bartlett, Minisitry ny fizahantany any Jamaika ary lehiben'ny Ivotoerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fitantanana krizy; Louis D'Amore, mpanorina ny Ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany; Profesora Geoffrey Lipman, filoham-pirenena an'ny ICTP ary SunX; ny minisitry ny fizahantany taloha ho an'ny Egyptianina Hisham Zazou; ny Hon. Sekreteran'ny fizahan-tany ho an'i Kenya Najib Balala; Dho Young-shim lehiben'ny STEP any Korea atsimo; ary Linda L. Nxumalo, Manampahefana momba ny fizahan-tany any Eswatini; amin'ireo mpitarika fizahan-tany manan-danja hafa manerana an'i Afrika. Manohana azy ireo ny masoivoho afrikana fizahan-tany sy ny mpikambana ao amin'ny birao avy amin'ny firenena 40 mahery. Ny fifanarahana fiaraha-miasa dia eo am-pelatanan'ny fikambanana maro-pirenena sy isam-paritra amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina.
Mila ny fanohanan'izao tontolo izao ny fizahantany afrikanina, ary mety ho orinasa lehibe io.
Africa dia mijanona ho iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto an-tany hampiasa vola amin'ny fotoanan'ny krizy. The Birao fizahantany afrikanina dia vonona hanamora ny fampidirana raha handeha ny fifanakalozan-kevitra.
Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia naorina tamin'ny taona 2018 avy amin'i Juergen Steinmetz, Publisher an'ny eTurboNews izay mijanona ho filoha mpanorina sy CMCO an'ny ATB ankehitriny. Tao anatin'ny herintaona, ny Birao fizahantany afrikanina nanjary lasa ONG afrika iray pan teo ambany fitarihan'ny filohany Cuthbert Ncube, CEO Doris Woerfel, COO Simba Mandinyenya, ary ny filoha Alain St.Ange.
Samaki Mkuu, ilay mpanakanto taloha fantatra amin'ny hoe Kenyan ace nilomano Jason Dunford niara-niasa tamin'ny Jus an'ny Jabali Afrika hamokatra hira COVID-19 hanampiana amin'ny fanaparitahana “ny hafatry ny halaviran'ny fiaraha-monina hamonjy ain'olona ary koa hanehoantsika ny fankasitrahantsika ireo mpitsabo manerantany manohitra ny lohalaharana”.
Ankoatra ny Birao fizahantany afrikanina izay miakatra amin'ny indostria lehibe indrindra eto an-tany, dia misy hetsika lehibe hafa. Ny mari-pamantarana lamaody libiana dia niova avy tamin'ny fanaovana akanjo goavambe ho akanjo goavambe.
Ny fikosoham-bolo dia fiovana avy amin'ny akanjo lamaody mahazatra fanaon'ny mpanjaitra
Vehivavy enina no manjaitra fikosoham-bolo ho an'ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy ao amin'ny orinasa fanaovana fitafiana Fashion House any Tripoli renivohitra.
Samy nilatsaka an-tsitrapo tamin'ny asa izy rehetra, ary ny sasany aza matory ao amin'ny ozinina mihitsy.
Nanamboatra akanjo 50 izy ireo hatreto ary miasa amin'ny andiany faharoa izy ireo izao.
Ny tompon-trano iray any Kenya dia nilaza tamin'ny mpanofa trano 34 fa tsy mila mandoa ny hofan'izy ireo amin'ny volana martsa sy aprily izy satria fantany fa areti-mifindra voan'ny virus coronavirus no nametraka azy ireo tao anaty toe-javatra sarotra ara-bola.
Michael Munene dia manana trano 28 any amin'ny distrikan'i Nyandarua andrefana izay vola 3,000 30 ariary Kenya ($ 23; XNUMX pounds) isam-bolana no ampandoaviny vola.
Izy koa dia manana trano enina ara-barotra nohofaina ho an'ny denaria Kenya 5,000 2,000 isam-bolana. Raha tsy misy mandoa ny mpanofa azy dia ho very ny $ XNUMX mahery.
Mpandihy Belly manao fampisehoana ho an'ny olona amin'ny Internet
Mandefa hafatra Nermine Sfar ny olona raha manao fampisehoana
Ny mpandihy kibo Toniziana Nermine Sfar dia nampiseho ny fihetsiny mba hitazomana ny olona ao an-trano mandritra ny fihidiana any amin'ny firenena Afrika Avaratra.
Nandefa mivantana dihy iray avy tao an-tranony izy isan'alina ary olona an-tapitrisany no nijery ny horonantsariny tao amin'ny Facebook tamin'ny herinandro lasa.
Nanomboka talohan'ny nanombohan'ny fanidiana - ny alahady 29 martsa ho an'ny Toniziana - na dia efa namporisihina hijanona ao an-trano aza ny olona tamin'izany fotoana izany.
Nanonona ny fanentanana nataony tao amin'ny media sosialy izy: “Mijanona ao an-trano dia handihy ho anao aho.”
Toa niasa izy io - mazàna an'arivony no tononkira isaky ny hariva, ary horonan-tsary iray tamin'ny herinandro lasa no jerena efa ho roa tapitrisa.
Popstar dia manome trano ho foiben'ny quarantine
Nalaza tamin'ny taona 1990 i Hamelmal Abate
Nisy kintan'ny pop Etiopiana nanome villa hampiasain'ny olona tsy maintsy hiditra amin'ny quarantine.
Tamin'ny volana lasa teo, ny governemanta Etiopiana dia nandidy ny olona rehetra tonga ao amin'ny firenena mba hatokana ho karana ao amin'ny hotely iray izay vola lany ho azy ireo mandritra ny 14 andro.
Zimbaboe fizahan-tany dia tsy afaka miandry ny famerenana ireo mpitsidika any amin'ny fireneny mahavariana ary hizara ity hafatra ity amin'ny tontolon'ny mpitsidika mety.
Miaraka i Afrika amin'ny fotoanan'ny krizy sy tahotra lehibe.
Voalaza matetika fa ny fiposahan'ny masoandro sy ny fiposahan'ny masoandro no tsara indrindra eto an-tany. Angamba noho i Afrika dia maro karazana, ny tontolo feno honahona any anaty ala, ala mikitroka, savana malalaka ary lemaka feno biby fiompy, ary tsy misy toa ny mijery masoandro milentika amin'ny morontsiraka tropikaly. Na inona na inona antony, rehefa hariva ny andro, ity kaontinanta mahafinaritra ity dia hamela mpitsambikina iray milentika amina masoandro milentika, ary rehefa miverina manodidina anao ny maraina dia tsy te-hanery ny bokotra snooze ianao!
The Birao fizahantany afrikanina maniry i Afrika ho toeran-kaleha iray safidy amin'izao tontolo izao.